Sawirro: Xoghayaha QM iyo Kheyre oo shir guddoomiyay shir looga hadlayay arrimaha Somalia - Hablaha Media Network
Sawirro: Xoghayaha QM iyo Kheyre oo shir guddoomiyay shir looga hadlayay arrimaha Somalia
HMN:- Shir caalami ah oo gaar u ahaa arrimaha dalka Somalia ayaa ka dhacay xarunta Qaramada Midoobay ee New York, waxaana shirkaan shir guddoominayay xoghayaha guud ee QM Antonia Gutters iyo ras’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Shirkaan heerka caalami ah ayaa waxaa ka qeyb galay madaxda dalalka daneeya arrimaha Somalia, midowga Yurub, ururka midowga Afrika, IGAD, Jaamcadda Carabta, iyo hay’adaha ka howlgala guud ahaan Somalia.
Shirkaan ayaa looga hadlayay xaaladda dalka iyo abaaraha ka jira gobolada dalka iyo sidii gacan looga geysan lahaa gurmadka abaaraha ayaa la isla gartay in la taageero Somalia.
Ra’iisal wasaare Kheyre ayaa xubnaha kasoo qeybgalay shirkaan wuxuu ugu warbixiyay xaalada dalka iyo howlgalada ka dhanka ah kooxaha argagixisada Al-Shabaab.
Shirkaan ayaa ahaa mid gaar oo arrimaha Somalia looga hadlayay, kaasoo barbar socday shirka guud ee Qaramada Midoobay.